musha Latin America Sporting Hunhu Charles Oliveira Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Charles Oliveira Biography inokuudza chokwadi nezve rake rehucheche Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri, Wife (Talita Roberta Pereira), uye Mwanasikana (Tayla Oliveira).
Moreso, Musanganiswa weMartial Artist's Mukoma (Hermison Oliveira), Mubhadharo, mambure akakosha, Hupenyu hwePamoyo, uye Mararamiro.
Zvichitaurwa zviri nyore, isu tinopa mufananidzo wepfungwa weiyo Hupenyu nhoroondo yaCharles Oliveira, weBrazil nyanzvi akavhenganiswa nemasoja. Yedu biography inotanga kubva panguva yekuzvarwa kwake kusvika mukurumbira wake.
Kuti uwedzere kuda kwako nyaya yedu yehucheche, tinopa nzira yemitambo yezviitiko zvakakomberedza hupenyu hwaCharles Oliveira. Pasina kupokana, iyo mifananidzo yaunoona pazasi inopfupikisa nhoroondo yehupenyu hwake.
Charles Oliveira Biography - Tarisai Hupenyu hwake nyaya kubva paucheche kusvika Kubudirira kwake.
Ehe, isu tinomuziva seiye akarebesa anokunda kuhwina streak mubato reUFC risingaremi. Kunyangwe zvaakawana kusvika pari zvino, takaona kuti vashoma vanhu vane zvakadzama ruzivo rweRuzivo Hupenyu.
Nekuda kweizvozvo, tinozviona zvakakodzera mukugadzirira kushandira iwe iyo inonakidza nyaya yaCharles Oliveira uye nekuparara kweyeMixed Martial Arts rekodhi. Tichifunga izvi mupfungwa, pasina kumwe kunonoka, ngatitangei.
Charles Oliveira yehucheche nyaya:
Kune ekutanga maBiography, iyo MMA nyanzvi ine zita remadunhurirwa - Do Bronx. Charles Oliveira da Silva akazvarwa musi we 17th waGumiguru 1989 kuna amai vake, Ozana Oliveira, uye baba kuGuarujá, São Paulo, Brazil.
Akauya munyika semwana wekutanga pakati pemunin'ina wake, ainzi Hermison Oliveira.
Charles Oliveira, pamwe chete nemukoma wake mudiki, akaberekerwa mumubatanidzwa pakati pevabereki vake. Pazasi pane mufananidzo waamai vake, avo vakamuunza saamai vasina murume.
Tarira Charles Oliveira pamwe naamai vake, Ozana.
Semwana mudiki, Charles Oliveira akada kutamba nhabvu mumigwagwa yeGuaruja. Vabereki vake vakapotsa vamugumisa kuti ave nyeredzi yenhabvu, saBrazilian Pelé naNeymar.
Zvisinei, pakutanga kwegumi nemanomwe, Charles Oliveira akaonekwa kuti ane mwoyo usina kugunun'una (inzwi rinonzwika pakati pekurova kwemoyo).
Uye zvakare, aive nerheumatoid arthritis, iyo yakanangana nemakumbo ake. Kurwara kwakakonzera iye kupedza makore maviri anotevera ehupenyu hwake muchipatara.
Kunze kwebhadhiro rakakura rekurapa, pakanga paine kunetseka kwakanyanya kana aigona kudzokera kuMitambo.
Zvakadaro, neshamwari uye nerutsigiro rwemhuri, Charles Oliveira akarapwa uye akapora zvishoma nezvishoma, nemajekiseni mazuva gumi nemashanu kwenguva dzinoverengeka.
Zvisinei nenhoroondo yake yehutano, chap yechidiki, kunyangwe yaive neushamwari, yaivewo nehunyanzvi hwekurwa. Saka, pa12, akabatana neshamwari dzake kumudzidzisa muBrazilian martial art uye mutambo wehondo unonzi jiu-jitsu.
Mufananidzo wehucheche waCharles Oliveira pamwe chete neshamwari.
Charles Oliveira Mhemberero Yemhuri:
Akakwidziridzwa muhurombo mughetto reGuaruja, Sao Paulo, mavambo mashoma aCharles akamutungamira kuti ajoine vashandi veBrazil achiri mudiki, achibatsira amai vake mukutengesa chizi masaradhi semwana.
Kubudikidza neiyi mutsara webasa, akasangana ndokuita hushamwari nevana vashoma vakarairidza jiu-jitsu. Baba vaCharles Oliveira naamai, Ozana Oliveira, vaive vasina kugadzikana mune zvemari. Vakatambura kuti vawane chouviri.
Charles Oliveira Mhuri Kubva:
Nechinangwa chekutsvaga madzitateguru ake, takaona kuti zita rekuti Oliveira muchiPutukezi rinoreva Muorivhi. 'de Oliveira' zvinoreva kuti 'Muorivhi.' Iri zita rinogona zvakare kureva 'kubva kuMuti wemuorivhi.'
Oliveira izita rinowanikwa kunyanya kuBrazil nePortugal neSpain, Italy, neMalta semisiyano mumitauro yavo.
Nekudaro, sezvambotaurwa, Charles Oliveira akaberekerwa uye akakurira muGuarujá, manenji kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweSão Paulo mudunhu reFederative Republic yeBrazil.
Guta, pamhenderekedzo yeAtlantic yeSanto Amaro Island. Nhoroondo inoti iyo Sao Paulo State yakatumidzwa zita reSaint Paul weTarso.
Nekureva, Charles Oliveira anodada muBrazilian uye anobva kuGuaruja. Pazasi pane mufananidzo unomiririra midzi yevatambi vakasanganiswa.
Mufananidzo wemifananidzo yemidzi yakasanganiswa yevarwi.
Basa raCharles Oliveira Pakutanga:
Mutambi weBrazil akatanga kutora chikamu muBrazil Jiu-Jitsu aine makore gumi nemaviri, achikunda zita rake rekutanga rakakura sebhandi jena muna 12. Akaenderera mberi nekukunda makwikwi akakosha mumwaka wese. Kubudirira kwake kunosanganisira:
Iwo matanho matatu eMakwikwi muSao Paulo muna 2004.
Iyo Copa Nação Jiu-Jitsu muna 2005.
Kumhanya kunoshamisa muna 2006 aine mamenduru gumi nematanhatu mumitambo yakakosha pakirogiramu yake yehuremu uye neboka rehuremu hwakavhurika.
Uye zvakare, muna 2007, Charles akatanga kudzora basa rake akananga kuMMA. Mwaka wa2007 akaona kukunda kwake kwekutanga mumutambo weMMA muamateur muBrazil unonzi Circuito de Vale Tudo Amador. Akakunda nearmbar.
Charles akatanga kudzora basa rake akananga kuMMA muna 2007.
Charles Oliveira Dzidzo:
Nekuda kwekutanga kwake kuita zvemitambo sebasa, Charles Oliveira aive nemukana mushoma weyakajairika Dzidzo. Kunze kwechikoro chake chepuraimari muGuraja, haana kuona madziro mana ekirasi.
Nekudaro, iye anofanira kunge akadzidza hunyanzvi hwepfungwa, senge maitiro akadzidzwa anoshandiswa nevatambi senge kurudziro, kuzvivimba, kumutsa kutonga, hukama hwehukama, uye kubata pamwe nekuchengetedza hutano hwakanaka panguva yemitambo.
Charles Oliveira anokoshesa Dzidzo uye nezvose zvazvinomirira. Nekudaro, pamusoro pezvese izvi, ane chinzvimbo chinotarisa kudzidzisa kweBrazilian Jiu-Jitsu kuGuaruja. Isu tinozivisa nzvimbo iyi seCentro de Treinamento Charles Oliveira Gold Team.
Charles Oliveira ane chinzvimbo chinotarisa kudzidzisa kweBrazilian Jiu-Jitsu.
Charles Oliveira Biography- Mugwagwa Unoenda Mukurumbira:
Oliveira aive neMMA yake yekutanga munaKurume 2008 kuPredator FC Welterweight Grand Prix, uye nezuva rimwe chetero, akabuda pamusoro pemakwikwi, achikunda scuffles matatu akateedzana.
Akakunda kurwa kwekutanga kuburikidza nekutumira, yechipiri neyechitatu neTKO. Pakanga pasisina chekutarisa kubva ipapo.
Muna 2008, akarwa makwikwi mazhinji achikwenya mabhandi mumitambo yakasiyana siyana, achisimbisa basa rake reMMA. Achinzwisisa kuti aive neramangwana rakanaka pamberi pake, akabatana neMacado Gold Team kuti anyatsoita mutambo wake.
Muna Ndira 2010, Oliveira akave wechitatu-akanakisa tarisiro yeBrazil kuona 2010, maererano naSherdog. Akabva asayina kuUFC uye akaita debut yake.
Kupokana kwakamuwanisa Kuita kweHusiku, Kurwa Kwehusiku, uye kuendeswa kwemubairo weHusiku.
Mufananidzo waCharles Oliveira mushure mekunge asaina iyo yeUFC uye akaita kutanga kwake.
Charles Oliveira Biography- Kumuka Mukurumbira:
NaJorge Patino (murairidzi paMGT) semurairidzi wake uye maneja, Charles akakunda nzvimbo muUFC. Muna 2012, Charles Oliveira akatamira kuboka re featherweight, achiwana mibairo yakawanda.
Sezvineiwo, kusaita zvakanaka kwake nekuda kwekukuvara kwemutsipa / papfudzi paanenge achiedza kutora pasi mu2015 uye 2016 zvakamutungamira kuti adzokere kuChiedza Weight chikamu.
Moreso, kubva adzokera kuchikamu chelightweight muna 2017, Oliveira anga angorasikirwa kamwe chete naPaul Felder panguva imwe chete.
Iye zvino ari pamutambo unoshamisa wekukunda kwe9, izvo zvakazoita kuti ave nezita.
Rondedzero inoshamisa yekukunda 9, iyo yakazomutungamira kuenda kuzita.
Nzvimbo yeUFC Lightweight Champion yanga isina munhu, ichitevera shasha Khabib Nurmagomedov's retirement.
Saka, rachikwidza kukwira manera kuti ave nemukurumbira, muna Chivabvu 2021, Oliveira akatarisana nevaimbove vatatu-nguva Bellator Lightweight Champion Michael Chandler. Ona clip iri pazasi yezvakakosha.
Oliveira akakunda mumakwikwi kuburikidza nehunyanzvi hwekugogodza kuti atore UFC Lightweight Championship.
Kunze kwekukunda kwekugogodza, aive achirekodha zvakanyanya kupera munhoroondo yeUFC. Kubudirira kweChampionship kwakawanawo Oliveira iyo Performance yeiyo Husiku bhonasi mubairo. Chinyorwa chake cheUFC chakamira pa30-8.
Charles Oliveira ari kufambidzana ndiani?:
Sezvinowanzo danwa nevateveri vake vari kukura, Do Bronx, anoverengeka anonyanya kufarirwa paMMA Fighters runyorwa. Akave zvakare akaisa munzvimbo yevakuru vevanozivikanwa. Nekudaro, iye angazoda kana kuve nemumwe wake wekugovana kukunda kwake.
Pasina kuziva, Charles Oliveira haana kuroora. Akaroora mu2014 akaroora Talita Roberta Pereira. Parizvino, mubatanidzwa wakawana pamwe nawo mwanasikana, Tayla Oliveira.
Charles Oliveira nerudo rwehupenyu hwake, Talita.
Nezve Mwanasikana waCharles Oliveira - Tayla:
Tayla Oliveira ndiye wekutanga uye wega mwana weBrazilian nyanzvi yakavhenganiswa nemasoja. Aive nemakore angangoita mana Charles Oliveira paakakunda mukombe weUFC Lightweight.
Tayla akauya munyika ino kubva mumubatanidzwa waCharles naTalita Oliveira mu2017. Zita rake rakasiyana naTailor kana Taylor, pakutanga zita rekubasa, zvichireva 'musoni.' Musikana akanaka ane account yake ye Instagram.
UFC Champion nemukadzi wake nemwanasikana, Tayla.
Charles Oliveira Hupenyu Hwemhuri:
Oliveira aisagona kunge akazviita ega, kunyangwe kukwirwa nemanera ebudiriro. Akave nekunakidzwa kusakamurwa kubva kunhengo dzemhuri yake. Pane ino noti, ngatitorei rumwe ruzivo muhupenyu hwavo hwega.
Nezve Mubereki waCharles Oliveira - Baba:
Kana iwe waona, kwete zvakawanda isu takanyora nezve UFC Champ's Baba; izvi imhaka yekuti tinonzwisisa zvishoma nezvake.
Zvisinei, tinorondedzera kuti ainetseka kuti awane chouviri. Hapana mubvunzo kuti kurwara kwaCharles Oliveira kunofanira kunge kwakamupedza simba mune zvemari.
Akanga ari mutengesi mutengesi uye saka akatengesa mazai pamusika wevarimi veko. Uye zvakare, kuroora kwake naOzana kwakabereka vanakomana vaviri. Charles Oliveira ndiye wekutanga nemunun'una wake, Hermison.
Nezve Amai vaCharles Oliveira - Ozana Oliveira:
Tinokwazisa simba uye chido chekuchengeta icho amai vaCharles, Ozana Oliveira, vakaratidza panguva yehurwere hwavo hwehuduku.
Akaramba kukanda mapfumo pasi kuti Mwanakomana wake aizopora. Sabhuku wake, kwaaishanda, akazobvisa mari yekurapa yakaitwa kuchipatara.
Ozana akashanda seChikoro Chekutarisira. Iye amai vanozvikudza vevanakomana vake vaviri, vari nyanzvi Mixed Martial artists.
Amai vaCharles Oliveira - Ozana Oliveira mukumbundirana naye.
Charles Oliveira Hama - Hermison Oliveira:
Akazvarwa nevabereki vakafanana munin'ina waCharles Oliveira, Hermison. Saiye UFC Champion, iye zvakare ari nyanzvi Mixed Martial Artist. Pasina kupokana, arikugadzirira gwara remukoma wake mukuru.
Kunyangwe MMA varwi vane kunze kwakaoma, ivo vachagara vaine chisungo chehama chinogara pakati pavo.
Zvisineyi kuti Hermison Oliveira haana chinzvimbo, anorwa muchikamu cheCorumbá Fight Combat (CFC) flyweight.
Mufananidzo waCharles Oliveira Mukoma - Hermison Oliveira.
Nezve Charles Oliveira Hama:
YeBrazil UFC Lightweight Champ inofanirwa kunge iine dzimwe hama parutivi pevabereki vake uye hama. Dzimwe hama dzake dzinosanganisira babamunini, vanatete, nasekuru nasekuru. Kunyangwe zvakadaro, isu tine ruzivo diki nezve ivo.
Nekudaro, Charles nemukoma wake vaive nehukama hwepedyo neshamwari yepamusoro yainzi Sekuru Paulo. Ndiye iye akaunza Oliveira kuna Jui-Jitsu. Nehurombo, akapfurwa akafa makore maviri gare gare.
Pasinei nehurongwa hwakabatikana hwakanamatira kune Mutambi weMMA MMA, zororo rinogara iri nguva. Charles Oliveira, munguva yake yemahara, anofarira kurovedzwa kunzvimbo yekurovedza muviri. Iye achiri kufarira kutamba nhabvu.
Uye zvakare, anotora chikamu mukusunga mijaho, kumhanya bhiza uko bhiza rinokweva ngoro yemavhiri maviri inonzi sulky.
Charles Oliveira paakasunga kumhanya.
Charles Oliveira akunda moyo yevateveri vake vari kuwedzera. Masocial media media anobata ane inokwira nhamba yevateveri. Iyo Instagram inobata yega ine vangangoita 1.3M vateveri.
Charles Oliveira Mararamiro:
Iine mibairo yakati wandei uye kukunda kunouya kusimba kwemari. Charles Oliveira akashanda dhongi rake kusvika pamusoro pebasa rake uye akakodzera zvakakwana kurarama hupenyu hweyekufungidzira, asingafunge nezve mutengo.
Kunyangwe zvakadaro, Charles Oliveira anotsanangura kuti kunyangwe hazvo zviyero zvepamutemo zvichiti anotora mabhonasi ekurwira kumba anokosha madhora zviuru makumi mashanu, iyo chaiyo mari yasara muaccount yake yekubhangi, mushure mezvose, zvakabviswa hazvisi kudarika $ 50,000.
Nekudaro, haisati yave nguva yekudaidza Charles Oliveira mupfumi nekuti zvese zvaakachengeta zvaizotaridza kuonda kana akaenda kwemwedzi mitanhatu kusvika minomwe pasina kurwa. Anogara nemukadzi wake, Talita Roberta Pereira, nemwanasikana muVicente de Carvalho, Guaruja, Brazil.
Collage yemota yaOliveira uye imba.
Sekureva kwemuterevhizheni, Oliveira ane mari inosvika mamirioni maviri emadhora, zvinonyanya kukonzerwa nebasa rake rekunetsana. Akawana madhora mazana maviri nemakumi mashanu emadhora ekukunda Tony Ferguson kuUFC 2.
Akawana inoshamisa $ 307,200 yekutumira kwake kukunda pamusoro paKevin Lee kuUFC Fight Night 170 muna 2020. Mari yaanowana pagore inofanirwa kunge ingangoita miriyoni imwe chete emadhora.
SaMaximum Human Performance (MHP) Mutambi anoonekwa nekupinda kwake muindasitiri yekuvaka muviri, Charles Oliveira anotsigirwa neMHP Supplement Company. Anowanzo gamuchira MHP nguvo uye zvinowedzera kubva kwavari.
Sezvo kambani yeMHP iine huwandu hwakawanda hwezvigadzirwa zvemitengo yakasiyana iri kushanda pasirese, tinogona kufunga kuti shasha yeUFC isingaremi iri kuwana mubhadharo wakakura.
Charles Oliveira - Kutsigira iyo Maximum Human Performance chigadzirwa.
Charles Oliveira Untold Chokwadi:
Kunze kweruzivo rwapihwa pamusoro, heano mashoma maidi anozokukanganisa nezvaCharles Oliveira nebasa rake rekurwa kusvika zvino.
Chokwadi # 1: Nickname:
Chita "do Bronx" chinoshamwaridzana naCharles paakatamira kuMacaco Gold Team. Aigara muFavela (slums), iyo dzimwe nguva inotambidzwa zita remadunhurirwa rekuti Bronx, uye jimusi kwaakatanga ndiko Bronx.
Naizvozvo, vamwe vevadzidzi vake vatsva vemujimu vakatanga kumudana kuti "Charles do Bronx," zvinoreva kuti "Charles weBronx."
Chokwadi # 2: Kutengesa chizi masaradhi seMwana:
Kufanana nevazhinji vakazvarwa mumatambudziko, Oliveira akatanga kushanda ari mudiki, achibatsira amai vake kutengesa masadhi esizi kubva mutrailer. Kutenda kubasa diki, Oliveira akaita hushamwari nevamwe vana vakadzidzisa jiu-jitsu.
Chokwadi # 3: Scholarship:
Aive akatenderedza 12 paakakokwa kuchikoro kuchikoro cheko. Mhuri yaOliveira haina kukwanisa kutsika bhiri rekudzidzira kwake, asi sekuziva kwababamunini vake murairidzi pachikoro ichi, "Do Bronx" aigona kuwana dzidziso pasina muripo.
Chokwadi # 4: Yake yemagariro Venture:
Oliveira akauya nenzira refu kubva paudiki hwake. Akatanga semwana akadzidza jiu-jitsu kuburikidza nehunyanzvi. Nekuda kweizvozvo, anovavarira kudzosera kunharaunda yake munzira dzose dzaanogona.
Nerutsigiro rwemhuri yake, akaisa chirongwa chemagariro chake munharaunda yake yekuGuaruja. Kuburikidza nebasa iri, anogona kubatsira vana kugara kure nenyika yematsotsi nekuvadzidzisa kubata.
Charles Oliveira Biography Pfupiso:
Mushure mekubuda seUFC Lightweight Champion, Charles Oliveira akataura chinangwa chake chekudzivirira zita rake nekuramba achishingaira. Nekudaro, akataura zvakare kuti akavhurika kuti adzokere kuchikamu cheFeatherweight kuti ajoine chikamu chemakundano maviri echikamu.
Kubuditsa iyo UFC Lightweight Champion inoratidza chete kutanga kweramangwana rakajeka kwaCharles.
Kuve nekupfupikiswa-pasi kwenyaya yehupenyu hwake, shandisa tafura iripazasi kuti uwane ruzivo rwakajeka nezveiye weBrazilian nyanzvi yakasanganiswa nemasoja.
Zita rizere: Charles Oliveira da Silva
Zita rekudanwa: Ita Bronx
Zuva rekuzvarwa: 17th Zuva ra Gumiguru 1989
Nzvimbo yekuzvarirwa: Guaruja, São Paulo, Brazil
Basa: Nyanzvi yeBrazil yakasanganiswa nehondo
Baba: Hazvizivikanwe asi Murimi
Amai: Ozana Oliveira
Hanzvadzi konama: Hermison Oliveira
Wife / Wawakaroora: Talita Roberta Pereira (m. 2014)
Mwanasikana: Tayla Oliveira (akazvarwa muna 2017)
Zuva Chikwangwani (Zodiac): Libra
MMA Rekodhi: 31-8-0 (WLD)
Hobbies: Bhora, Harness Mujaho, Kushanda kunze kuGym.
kukwirira: 5 ft 10 inches (1.78 m)
Weight: 155 lbs (70 kg; 11.1 st)
Net Worth: $ Miriyoni makumi maviri (2)
Muhoro: $ Miriyoni 1
Kunobva Pfuma: Nyanzvi yakasanganiswa yemasoja eUFC uye Endorsements.
Residence: Vicente de Carvalho, Guaruja, Brazil
Mukuvhara Charles Oliveira's Biography uye Childhood Nhau, isu tinofungidzira iwe wakadzidza zvishoma zvidzidzo. Izvo zvakakosha nguva dzose kuti urambe uchienderera, kunyangwe kana kuenda kwacho kuchinge kwakaoma. Zviroto zvinoitika nekushingaira uye nemazvo.
Kunyangwe hosha yaCharles Oliveira yehudiki, pakanga pasina iota yekuora moyo kubva kwaari nemhuri yake. How Charles Oliveira anorova zvisingaite kurwira zita reUFC inoratidza tariro yeramangwana riri nani pane hupenyu.
Tinotenda kuti iwe wawana izvi kunyora-kumusoro kunonakidza uye kunonakidza. Nyorera zvimwe zvebhaibheri chokwadi neepamusoro-notch mhando.
Conor McGregor Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi